မြန်မာတိုင်း(မ်) အယ်ဒီတာ ဒန်ကလေ ရန်ကုန်အိမ်တွင် အဖမ်းခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာတိုင်း(မ်) အယ်ဒီတာ ဒန်ကလေ ရန်ကုန်အိမ်တွင် အဖမ်းခံရ
Posted by ဂျစ်စူ on Feb 12, 2011 in Myanma News, News |4comments
myanmar times editor
အောက်ကတော့ Freedom News Group မှ ဖြစ်ပါတယ်.
တင်ကျော်ကျော်စိုး၊ ၊ဆေးခြောက်မှု ဖြင့် ဖမ်းဆီးထား သည် ဟု သတင်းထွက်ပေါ် နေ
ရောစ် ဒန်ကလေ က ဖမ်းဆီး လိုက်သည်ဟု Freedom News Group မှ သတင်းရရှိသည်။
ည ကလပ် တစ်ခု တွင် တွင် CD-ROM ဖြင့် သိမ်းမှတ်ထား သည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာ ရှိ ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် အား အင်းစိန်ထောင်
…အဲဒီ အပိုဒ် မရှင်းဘူး။ ဘယ်လိုဖတ်ဖတ်။
ယခင်က မြန်မာ တိုင်းသတင်းစာတွင် အစုရှယ်ယာ အများ ဆုံး ပါဝင် ထားသည့်
ရောစ် ဒန်ကလေ က ဖမ်းဆီး လိုက်သည်ဟု လို့ ဆိုထားတာ မြှားနတ်မောင်မှာလဲ ဒီအတိုင်း ရေးထားတယ် .. ရောစ်ဒန်ကလေ (ကို) ဖမ်းတာလား .. (က) လို့ ရေးထားတော့ အရာရှိရဲ့ သမီးကို ရောစ်ဒန်ကလေ (က) ဖမ်းတယ် ဖြစ်နေလို့ .. မရှင်းလို့မေးတာပါ .. ခေါင်းစဉ်မှာက အဖမ်းခံရတယ် .. စာသားမှာက (က) ဖမ်းဆီးလိုက်တယ် .. ဆိုလို့ပါ
Mr Dunkley is likeafish that only sees the bait but not the hook. Asafellow human I pity him but I do not condone of what he has done – either in Burma or Cambodia. As an Australian he should know that we all appreciate the Australian ethos of ‘fair go’. But neither him nor his paper Myanmar Times has given Burma or the people of Burmaa‘fair go’. He should know by now how association with military dictators is like ‘playing with fire.’ You’ll get burnt sooner or later. Not only has his paper discredited journalism in general and Australian love for press freedom in particular what chance will he have fora‘fair trial’ if he is brought on trial and it’sabig IF. If he has established Myanmar Times as something which journalism is meant for he would be able to reveal the ‘Stalinist show trials’ that most people in Burma have to face under the military dictatorship. All we can do is to wish him luck.